Abahlonizi ngalowo abafuna abahole eqenjini nasezweni - Bayede News
Abahlonizi ngalowo abafuna abahole eqenjini nasezweni
Umhlomulo usudunge ukusebenza kwezinduna zaMakhosi
Akuseyona imfihlo ukuthi amalungu kaKhongolose KwaZulu-Natal azoya enkomfeni kulokhu engeyona imbumba njengeminyaka eyedlule
“NAMUHLA sithumela umlayezo omqoka kulabo abebecabanga ukuthi KwaZulu-Natal kunokungabaza ukwamukela ubuholi bePhini likaMengameli”. Lawa ngamagama okuvula akhulunywe nguMnu uMike Mabuyakhulu ezinkundleni zemidlalo iCurries Fountain ngesonto eledlule. Obamukelwa lapha iPhini likaMengameli we-African National Congress (ANC), uMnu uRamaphosa. Yize umcimbi ubuhlelwe wuFasimba (iSouth African Communist Party Youth League, okugqamile wukuthi lona bekuwumhlangano walabo abahambisana nomkhankaso kaRamaphosa wokuba nguMengameli kaKhongolose ngoZibandlela. Okunye obekungafihliwe wukuthi abebe lapha yilabo abangahambisani nobuholi besifundazwe bukaMnu uSihle Zikalala.
Lona bekuwumbuthano wokuqala walolu hlobo nayilapho labo abeseka uRamaphosa bephumele obala, bangesaba futhi bangaba namahloni ngalowo abamthandayo. Izevatho kanye nezingqwembe ebezithi #Siyavuma, ngemuva zibhalwe ukuthi CR17 bekuyikubo kwazo. Zikhona nalezo ebezinobuso balowo owayenguSihlalo kaKhongolose noNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu uSenzo Mchunu. ElaboHlanga lithole isikhathi sokukhuluma nabanye babantu abebekulo mcimbi abebevela kuzo zonke izingxenye zesifundazwe. Iningi lala malungu belikhuluma ngaphandle kokwesaba ukuthi yini elenza liqoke ukweseka uRamaphosa kanti amathuba emisebenzi nenkohlakalo nokubumba inhlangano, yikho obekuseqhulwini kulaba abakholwa ukuthi uRamaphosa ukulungele ukuhola i-ANC. UNkk uPhumzile Sibiya waseJozini uthe unqume ukushiya konke wazolalela uRamaphosa ngoba unethemba lokuthi uma ethatha izintambo, uyokwazi ukubuyisa izimayini ukuze kudaleke amathuba emisebenzi.
Ukuza kwami lapha akusikho nje ukuthi yingoba ngifuna ukuzula noma ngithanda ukuhamba kodwa nginesizathu sokuthi ngizobona uRamaphosa ngoba ngiyamethemba.
“Ukuza kwami lapha akusikho nje ukuthi yingoba ngifuna ukuzula noma ngithanda ukuhamba kodwa nginesizathu sokuthi ngizobona uRamaphosa ngoba ngiyamethemba. Okokuqala uma ethatha izintambo ngikholwa ukuthi uzokwazi ukuthi abuyise izimayini esezavalwa. Lokhu kuzosiza ukuba izingane zethu zithole imisebenzi ngoba nawe uyabona ukuthi kulanjiwe akusebenzi muntu emizini yethu. Impela nje siyamethemba futhi asimboni omunye ngaphandle kwakhe,” kusho uNkk uSibiya.
UNkk uPhumzile Ngobe ophuma eJozini, uthe ngakubo kusemakhaya impela kodwa wonke umuntu ufuna uRamaphosa ngoba ubonwa njengomholi ongakwazi ukubuyisa imisebenzi engasekho ezweni. “Uyazi kunento eningayazi njengoba nilapha eThekwini ukuthi ngale ngakithi ngisho abantu abayiNkatha bayamthanda uRamaphosa, kangangokuthi uma enganqoba asingabazi ukuthi i-ANC iyolithola ivoti labantu be-IFP koJozini. Uyabona nomlando wakhe njengoba ubuchazwa (uNkk uZingisa Losi weCosatu) besilalele kahle futhi sibonile ukuthi lo muntu akangabazeki ukuthi angaba umholi oqotho nozobuyisa ubumbano kuKhongolose. Siyezwa nanokuthi ukhona nakwezezimayini. Lokho nje kukodwa kusitshela ngokusobala ukuthi uma ephatha nezwe ziningi izimayini ezizovulwa ukuze kusebenze izingane zethu.”
UMnu uLucky Mbanjwa wegatsha iThemba Ntombela ngaphansi kwesiFunda iMoses Mabhida, eSweet Waters, uthe i-ANC isesimeni lapho nabo bengamalungu bezenyeza ngayo, ngakho babona uRamaphosa engumuntu okahle kakhulu ukuba ayilungise. “Kubi ngoba sekunabantu abafisa ukwenza izinhloso asebeqinisa igama lokuthi akuwona umgomo ukuthi umuntu oyiphini likaMengameli, kumele kubenguye othatha izintambo uma sekufika ingqungquthela yokushintsha ubuholi. Thina siyakholelwa ukuthi nakuba kungeowona umgomo kodwa sekungumkhuba osusebenze isikhathi eside ku-ANC esingakaze sizwe uphonselwa inselelo.
“Ngakho uRamaphosa nguye ofanele athathe izintambo ngoba useyithemba kithi esilibona lizobumba i-ANC, aphinde aqede le nto yenkohlakalo nokwenza sengathi i-ANC eyabantu bomndeni othile kuphela,” kusho uMbanjwa. UMnu uLinda Khuboni waseMoses Mabhida uthe ukuze i-ANC ikwazi ukulwa nenkohlakalo, kudingeka iqoke uRamaphosa ekubeni uMengameli wayo. “I-ANC isesimeni esinzima lapho inkohlakalo kuyiyo ehamba phambili kanye noqhekeko lokungezwani kwamalungu. Ngakho sikubona kuyinto engabangcono uma kungakhethwa uRamaphosa ngoba thina size lapha nje yingoba siyakholelwa ebuholini bakhe. Ungumuntu ombonayo ukuthi uma ethatha izintambo angafike ashanele konke ukungcola esikubonayo nesingagculisekile ngakho.
“Okunye ukuthi uRamaphosa akayena lo mholi ofuna ukuba uMengameli ngoba elambile noma egaqele iholo ngoba vele ucebile, unakho konke. Ngakho ungumholi ombonayo ukuthi ufuna ukubuyisa isithunzi sezwe lethu nokunikeza ithemba kubatshalizimali ukuze kwande amathuba emisebenzi,” kusho uKhuboni. UNks uBongiwe Zwane wegatsha iSmiso Nkwanyana ngaphansi kwaseMoses Mabhida, uthe bona abakufunayo ku-ANC ubumbano nokuyinto ababona izokwenziwa uRamaphosa.
“Mina engikufunayo ukuba kwakhiwe kabusha i-ANC, kubuyiswe leya endala esasiyazi nesayilwela sabanezibazi ngenxa yayo. Njengamanje akusiyona leya ANC esakhulela kuyo sekungenye nje esingakwazi ngisho ukuya emihlanganweni yayo ngoba siyavinjwa, uvele ubone sekwedlula ibhasi kuthiwe kuyiwa embuthanweni kodwa ungazi. Yikho mina ngibona uRamaphosa efanelwe ukuba uMengameli ukuze abuyise loya Khongolose owawubumbene wakudala. Okunye ukuthi uRamaphosa simbona sengathi uzokwazi ukubhekela izindawo zasemakhaya ngoba zisasele emuva kakhulu ngentuthuko. Akugcini lapho ngisho indaba yomhlaba, uyabona ukuthi izwe labuya kodwa asizange sinikezwe umhlaba wethu. Ngakho sethemba yena ukuthi uzokwazi ukukwenza lokho kuphinde kusizwe nabantu bakithi ababuyiselwa umhlaba baqeqeshwe ngamakhono afanele ukuze bakwazi ukuwusebenzisa,” kusho uNkk Zwane.
UNkk uSijabulile Mbatha wakwaMaphumulo ngaphansi kwesifunda iKwaDukuza yena uthe akaphoqwanga njengoba esembuthanweni kaRamaphosa kodwa yingoba uyameseka futhi uyamethemba ukuthi angaba uMengameli oqotho we-ANC. “Ngiyethemba ukuthi uRamaphosa uma ephatha uzosizwa uma sikhala ngobugebengu obenziwa amakhansela asiphethe. Ngisho ezindaweni zasemakhaya ngikholwa ukuthi uzoletha uguquko ngoba ezinye zazo kusashayisa ngamahloni ukuya kuzo ngenxa yokusalela emuva ngentuthuko. Uyabona nje mina uma ngiya ekhaya izulu lina kufanele ngithwale kanzima ngoba imigwaqo iwudaka akuhambeki kuyashibilika,” kusho uNkk u Mbatha.
UMnu uPatric Maduna waseMvoti esifundeni iNkosi Bhambatha, uthe abakwaziyo ukuthi iNingizimu Afrika ngaphansi kobuholi obukhona be-ANC iphuciwe abanikazi bayo yanikezwa izihambi. “Uyabona izwe lethu liphethwe izihambi, zidla ingcebo yethu ngendlela ezithanda ngayo. Ngakho uRamaphosa uyena muntu engimboni engumholi ozokwazi ukubuyisa izwe kubanikazi balo okuyithina bomsinsi wokuzimilela. Sifuna athathe izintambo ukuze alethe noguquko sibone izinto zibangcono kunalokhu eziyikho manje enhlanganweni,” kusho uMaduna.
UMnu uMalusi Sosibo naye osuka eNkosi Bhambatha uthe “ Thina sifuna uRamaphosa alethe uguquko nobumbano ku-ANC ngoba okwamanje izinto zonakele kakhulu awazi nokuthi kubhekwephi. Inkohlakalo idla lubi kanti njengomholi oqotho sethembe yena ukuthi uzokwazi ukulwa nayo,” kusho uSosibo. NoNkk uVeronica Ntuli waseDokodweni naye uphawulile “Njengelungu elethembekile kuKhongolose ngiyamethemba uRamaphosa ngoba umlando wakhe kwezamabhizinisi uyazikhulumela ekutheni ungumuntu onabo ubuholi esibudingayo njengamanje ku-ANC.
Imizamo yakhe emaholweni amancane angaholwa (minimun wagei) isikhombisa ngokusobala ukuthi ungusomaqhinga ongakwazi ukuthi noma esephatha izwe aqhamuke nezinhlelo eziyoba isixazululo kubasebenzi. Engikujabulela kakhulu ngaye ukuthi izingane zethu zizohlomula kakhulu ngaphansi kobuholi bakhe ngoba amathuba emisebenzi angingabazi ukuthi azogeleza eNingizimu Africa,” kusho uNkk Ntuli. Okunye okugqamile ukuthi abaholi abanye abaxoshwa ezikhundleni zikahulumeni, abanye abebengasaziwa emehlweni omphakathi sebeziveze obala ngaphandle kokwesaba ngoRamaphosa KwaZulu-Natal.
Phakathi kwabo kubalwa uMnu uSboniso Duma owayesebuholini be-ANCYL KwaZulu-Natal nophinde abe yilungu leSishayamthetho sesiFundazwe, uNkk uZanele Hlatshwayo owayeyiMeya yaseMsunduzi nowasuswa esikhundleni ngezinsolo zenkohlakalo, ukhansela uSthenjwa Nyawoswe waseMlaza, oke wanyamalala ngemuva kokuba i-ANC yayimbizele ekomitini lokuqondisa ubugwegwe ngokuhola kwakhe amamashi ayefuna kuhlakazwe ubuholi bukaZikalala.
Bayede News Oct 24, 2017